रोड बाट एक नोट | Martech Zone
सडक बाट एक नोट
बिहीबार, अप्रिल 26, 2018 Douglas Karr
पछिल्लो वर्ष मेरो र मेरो व्यवसायको लागि आश्चर्यजनक वर्ष हो। रिफोकस र मेरा ग्राहकहरु लाई ध्यान फलदायी भएको छ र म संग अविश्वसनीय ग्राहकहरु को लागी आभारी छु! चुनौती मैले उनको सन्तुलन कार्य गरेको छु (जुन मलाई मनपर्दछ) स्वास्थ्यसँग (जुन मैले उपेक्षा गरेको छु)। पछिल्लो बर्षमा, खराब बानीको साथ घाइतेहरूले मेरो वेस्टब्यान्डलाई यसको अधिकतममा धकेलेको छ र पीडाले मलाई अस्थिर पारेको छ।
यो अनप्लग र पुनः फोकस गर्ने समय थियो।
एक निर्धारित निर्धारित यात्राको साथ डेल वर्ल्ड, मैले बैठकहरू बदल्न र ग्राहकहरूसँग अपेक्षाहरू सेट गर्न अवसरहरू कि म सडकबाट काम गरिरहेको छु। मैले इण्डियानापोलिसबाट लास भेगास सम्म गाडी चलाउने निर्णय गरें, दक्षिणी मार्गमा जुन जीवन परिवर्तनबाट कुनै छोटो छैन।
टेक्नोलोजी र हाम्रो भविष्यको बारेमा सोच्दै
यात्राको लागि मेरो डाउनटाइमको धेरैजसो १० वा सो अन्तर्वार्ताहरू मध्ये प्रत्येकमा अनुसन्धान गर्न खर्च गरिएको छ हामीसँग पोडकास्टहरू गरौं डेल ल्युमिनरीज। विषयहरूको दायरा र टेक्नोलोजीको प्रयोग तपाईंको कल्पनाभन्दा बाहिर छ - सदस्यता लिन निश्चित हुनुहोस्। म यस हप्ताको मानव-टेक्नोलोजी भविष्यवाणीहरूमा प्रभावकारी प्रस्तुतिमा पनि बसें - जसले मलाई यस यात्राको बारेमा धेरै सोच्न बाध्य तुल्यायो।
किनभने म मेरा उपकरणहरू बोक्दै छु, मैले भाडामा लिएँ २०१ Ch क्रिस्लर Pacifica सबै घण्टी र सिट्टी संग। सुविधाहरू समावेश:
कार्प्ले - आईओएसको एक्स्टेन्सन जुन मिनी-भ्यानसँग निर्दोष रूपमा काम गर्दछ, नेभिगेसनबाट, सिरीमा, कल गर्न, संगीतमा।
अनुकूलन क्रूज नियन्त्रण - मेरो दिमाग यस सुविधामा बिल्कुलै उडाइएको थियो। क्रूज नियन्त्रण सेट गर्नुहोस् र कार स्वत: यातायातको साथ गतिमा रहनेछ।
लेनसेन्स - कारले तपाईंको लेन पत्ता लगाउँदछ र तपाईंलाई पछाडि धकेल्दछ जब तपाईं बायाँ वा दायाँ तिर जानुहुन्छ। र स्टीयरिंग व्हीलबाट तपाईका हातहरू लिएर ठग्ने कोशिश नगर्नुहोस् - यसले तपाईंलाई चिच्याउनेछ।
Parking 360० पार्कि cameras क्यामेरा - मलाई थाहा छैन उनीहरूले के जादू प्रयोग गर्छन्, तर पार्कि forको लागि ब्याक-अप सहयोग विझार्ड्रीबाट केही कम छैन।
जबकि हामी यी रूपमा सोच्न विशेषताहरु, वास्तविकता यो हो कि यो मानव-यन्त्र अन्तरक्रियाको भविष्य हो। केहि छैन मेरो जागिर लिए मबाट ... यी सबै सुविधाहरूले मद्दत गर्‍यो र मेशिनसँग मेरो अन्तर्क्रियामा सुधार ल्यायो। उनीहरूले मेरो ड्राइभलाई सुरक्षित बनाए, राम्रो ग्यास माइलेज मद्दत गर्न मद्दत गरे, र मेरो फोनबाट कारमा मनोरन्जन विस्तार गरे। यसै कारण म भविष्यको बारेमा चिन्तित छैन, म योको लागि उत्सुक छु।
टेक्नोलोजीको अभाव र हाम्रो भविष्यको बारेमा सोच्दै
टेक्सास, न्यू मेक्सिको, एरिजोनामा, र अब युटामा पुग्दा मलाई शून्य जडानको साथ अनलाइन अनलाइन अवधिको अवधिहरू थिए। कहिलेकाँही, यो नेभिगेसनको बिचमा नै थियो! मैले भर्खरै यो सबै गर्यो। कुनै सतर्कताहरू, बीपहरू, हप्टिक प्रतिक्रियाहरू ... केवल चुपचाप। एक बिन्दुमा, म सूर्यास्त हुँदा नाभाजो पुलमा रोके, बाहिर हिंडें, र म स्तब्ध भएँ - त्यहाँ केहि पनि थिएन। कुनै आवाज, कुनै अवरोधहरू, कुनै व्यक्ति छैन, तपाईं पनि बतास सुन्न सक्नुहुन्न। मलाई थाहा छैन म कहिल्यै बढी आराम पाएको छु।
जब हामी एकीकृत गर्छौं र हाम्रो भविष्यलाई स्वचालित रूपमा, हामीलाई विच्छेद गर्न समय चाहिन्छ। म हरेक हप्ता त्यो गर्न कोशिस गर्न गइरहेको छु। मलाई लाग्दैन कि 24/7 जडान मेरो लागि स्वस्थ छ। यो पनि तपाईका लागि नहुन सक्छ।
हामी चाँडै पकड गर्नेछौं
मेरो पछ्याउनुहोस् इन्स्टाग्राम यदि तपाईं केहि आश्चर्यजनक ठाउँहरू म हेर्न चाहनुहुन्छ भने। मैले उल्लेख गरे फेसबुक कि म फेरि कहिल्यै उड्न सक्दिन - हामी यो सुन्दर देशबाट हामीले छुटेका सबै अविश्वसनीय चीजहरूको बारेमा सोच्दै माथि उडान सट्टामा को माध्यम बाट ड्राइभिंग.
म दैनिक जाँच गर्दैछु, र त्यसपछि कफी पसलहरूमा आवधिक रूपमा रोकिरहेछु। आज, यो हो नदी रक भकाउने कम्पनी। दृश्यका लागि यो कस्तो छ:
त्यसो भए, म तपाईंलाई मात्र किन जान्न चाहान्छु कि - प्रकाशनको १ years बर्ष पछि - तपाईंले पछिल्लो दुई हप्ता धेरै धेरै पोष्टहरू देख्नुभएन। मेरो खाना ट्र्याकमा फर्केर जाँदा, मेरो मस्तिष्कले केही ताजा हावा प्राप्त गरिरहेको छ, मेरो आत्माले प्रेरणा दिन्छ, र मेरो सबै वर्षको सबैभन्दा ठूलो सम्मेलन यही महिनामा ... म मेमा मेरो जीवनमा केही सन्तुलन प्राप्त गर्न अगाडि छु।
अब र त्यस बीचको बीचमा, यदि तपाईं बिक्री वा मार्केटिंग टेक्नोलोजीको बारेमा पाहुना पोष्ट लेख्न चाहानुहुन्छ - हिट गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् पृष्ठ बुझाउनुहोस् र भर्नुहोस् सबै विवरणहरू अनुरोध गरिएको कृपया कुनै ब्याकलिंकर छैन।
जानु भयो ... मेरो शक्ति%% मा छ।
टैग: एरिजोनाdouglas karrनयाँ मेक्सिकोसडक यात्राउहाह
त्वरित अन्तर्दृष्टि: प्रत्यक्ष मेलका लागि भविष्यवाणी परीक्षण